Ngwa ngwa ube na ewu cheese quiche | Bezzia
Ngwa ngwa ube na ewu cheese quiche
Maria onyekwere | 04/01/2022 10:00 | Emelitere ka 30/12/2021 19:23 | Ntụziaka dị mfe
Quiches bụ achịcha na-atọ ụtọ na isi nke achịcha dị mkpụmkpụ na njuputa akwa na crème fraîche nke a na-esi na oven ruo mgbe edobere ya. A kpochapụrụ nri French nke na-ekweta ọtụtụ ọdịiche na nke taa anyị na-eme ụdị dị mfe: ngwa ngwa quiche na ube na cheese cheese.
Mgbe mmadụ na-achọghị mgbagwoju anya ma ọ bụ na-achọ inwe ike iweta uzommeputa na tebụl na obere oge, ihe dị mma bụ ịkụ nzọ na azụmahịa azụmahịa. Ihe kachasị mma bụ iji ntụ ọka mkpirisi mkpirisi azụmahịa, mana ị nwekwara ike iji a achịcha dị iche iche, enwere ike ịnweta ya na ụlọ ahịa ọ bụla. Ọ bụrụ na oge adịghị mkpa na ị chọrọ ime ka gị onwe gị mgwakota agwa, i nwere ike ịhụ otú e si eme ya na uzommeputa nke salmon quiche na anyị na-akwado ime oge.
Banyere ndochi, ịkwadebe ya agaghị agwa gị ihe ọ bụla. Nkeji 10 nke puff pastry ga-ebu ụzọ sie ya na oven zuru iji dozie ya. Ma na ihe niile ị ga-eme bụ isi nri nduku na ngwa ndakwa nri ma gwakọta ihe ụfọdụ. Anyị ga-amalite?
1 achịcha achịcha
2 pears ọgbakọ chara acha, bee na diced (1,5cmx1,5cm)
1 poteto, bee na diced (1,5cmx1,5cm)
80 g nke diced ewu cheese
1 akwa ọcha maka ịsa ahịhịa
70 g nke ude mmiri mmiri
Otutuuk ofifi inu geelek
Wepụ puff achịcha dị iche iche ma tinye ya na ebu (nke a na-ewepụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ inwe ike ijere ya ozi na efere ma ọ bụ efere). Debe isi na mgbidi ahụ nke ọma ma wepụ ngafe mgwakota agwa. Mgbe ahụ, jiri ndụdụ tụọ ala ala, tinye akwụkwọ akpụkpọ anụ n'elu na mkpọ nkụ n'elu. Ime ya na 190ºC na oven preheated maka nkeji 10. Mgbe ahụ wepụ akwụkwọ na akwụkwọ nri na akpọọ nkụ 4 ọzọ nkeji. Ozugbo emechara, wepụ ya ma were iwe ka ị na-akwadebe njuputa.
Iji kwadebe ndochi ahụ, tinye cubes nduku na efere, kpuchie ha na mkpuchi plastik na were ha na ngwa ndakwa nri. Sichaa ha na ike zuru oke maka ihe dị ka nkeji 4 ruo mgbe ha dị nro.
N'aka nke ọzọ, na efere, mix akwa na ude mmiri mmiri na ntụtụ nke nnu na ose.
Ozugbo ị kwadebere akụkụ niile nke ndochi ahụ, ahịhịa ntụ ọka achịcha dị iche iche na akwa akwa ka njuputa ghara ime ka ọ dị mmiri.
Emechaa kesaa nduku dice, cheese na ube na ebu.
Imecha wunye na ngwakọta akwa na ude, wee na-ebugharị ebu ahụ ntakịrị ka ọ banye nke ọma n'etiti dice ahụ, tupu ịfesa mkpụrụ osisi pine n'elu.
Were na oven na esi nri maka 35 nkeji ma ọ bụ ruo mgbe edobere na aja aja aja na 190ºC na-ekpo ọkụ na elu na ala.
Wepụ ma chere nkeji iri ka iwe were rie ngwa ngwa ube na cheese quiche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ntụziaka » Ntụziaka dị mfe » Ngwa ngwa ube na ewu cheese quiche
Ngwaọrụ iji kwalite mkpuchi WiFi n'ụlọ
Mmetụta nke iwe na onye òtù ọlụlụ